NAMOY KINTAN’NY KITRA I TOAMASINA : Nodimandry ny 16 septambra i Debon Richard
Debon Richard Alexis. Iray amin’ireo andrarezin’ny kitra teto Madagasikara. Saika nahalala azy avokoa ny mpitia baolina kitra malagasy ny taona 80 sy 90. 6 octobre 2017
Tao amin’ny klioba Jeunesse Catholique de Vohémar no niakarany kianja ofisialy voalohany. Nifindra monina tao Toamasina izy taorian’izay, ka hitan’ny Mmm ( Mpianatra Mpiasa Miaraka) ny talentany. Nampalaza azy fatratra ny tao amin’ny Mmm. Mpilalao tsy afaka am-bavan’ny mpijery baolina ny taona 80-90 izy. Nibata ny tompondakan’i Madagasikara ny Mmm, ny taona 1980 ary mpilalao tao anatin’io i Debon Richard Alexis.
Taorian’ny Mmm dia nalain’ny klioba Union Ambanja tany Avaratra. Nitsiriritra azy ny As Fortior ka niverina tao Toamasina indray ny tenany nanatevin-daharana ny As Fortior. Ankoatra ny tontolon’ny baolina kitra, dia nahafantarana azy koa ny sehatry ny fambolena sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Injenieran’ny-fambolena ny tenany. Andraikitra farany nian-tsorohany mialoha ny nahafatesany ny naha mpanolotsaina manokan’ny lehiben’ny Faritra Analanjirofo azy.
Ny sabotsy 16 septambra lasa teo no nodimandry tao Toamasina i Debon Richard Alexis. Teo amin’ny faha-65 taonany izy izao nodimandry izao noho ny aretina nitaiza azy. Ny alatsinainy 18 septambra lasa teo no natao ny fanaovam-beloma azy farany tao amin’ny Ekar Saint-Louis de MontFort sy nanitrihana azy ao amin’ny cimetière Vazaha. Namoy ny kintan’ny kitra i Toamasina.
Tsara ny manamarika fa misandrahaka amin’ny tontolon’ny baolina kitra eto Madagasikara ny fianakavian’i Debon Richard.
Ny rahalahiny Debon Jean dia misahana ny andraikitra Tale tekinika nasionaly eo anivon’ny Federasiona malagasin’ny ny baolina kitra ( Fmf). Izahay eto amin’ny gazety Ino Vaovao Faritra dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakavian’i Debon Richard Alexis manontolo.